Fanisam-bahoaka sy fanampiana 100 000 Ar Hanao ahoana ny tohiny ?
Nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena “digitalisation” eny amin’ny fokontany rehetra izay zava-dehibe hataontsika, ka hanombohana azy ireo faritra 3 anaty fihibohana (Analamanga, Matsiatra Ambony, Antsinanana),
hoy ny Filoha ny 8 aprily, 18 andro lasa izay. Alaina ny mombamomba ny olona rehetra na ny “base de données”, ka hisoratra ao daholo ny isan-tokantrano. Nambarany fa miaina anaty fahasahiranana ny Malagasy: trano efitra roa feno olona maro, tsy manana kara-pokontany sy kara-pifidianana,... Hosoratana amin’ny solosaina daholo, ka hovatsiana solosaina avokoa ny fokontany ary hisy ireo “operateurs de saisie” avy amin’ny minisitera. Alaina ny rejisitra ary omena laharana.Omena « carte magnétique » miaraka amin’ny « code barre » avokoa ny olona. « Scanner-na” iny dia hita ao daholo hoe iza no tonga sy tsy tonga, iza no nahazo fanampiana ary iza no tsy nahazo. Homena 100 000 ariary ny olona sahirana, ary tsy maintsy ho vita ao anatin’ny 10 andro ireo. Tena vita sy mandeha laoniny ve? Misy ihany ny fandraisana anarana amin’ny toerana sasany, fa mitarazoka na tsy re ny tohiny, misy ny mbola tsy nanao, ao koa ny efa nahavita . Hanao ahoana ny tohiny amin'izao efa miverina tsikelikely izao ny asa aman-draharaha sy ny fianarana.